eHimalayatimes | सम्पादकीय | अर्थतन्त्रको भयावह चित्रण
19th January | 2019 | Saturday | 4:30:36 PM
अर्थतन्त्रको भयावह चित्रण
POSTED ON : Sunday, 01 April, 2018 (5:37:36 PM)
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दैै स्वेतपत्र जारी गरेको छ । केही अपवादबाहेक स्वेतपत्रले आर्थिक अवस्था निकै संकटग्रस्त रहेको देखाउँछ, अथतन्त्र भयावह रहेको देखाउँछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार धेरै कारणहरूका अतिरिक्त ‘वित्तीय अनुशासनका सीमाहरू निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले’ र ‘वितरणमुखी बजेट बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेकाले’ मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ । अर्थमन्त्रीकै शब्दमा देशको ‘ढुकुटी रित्तो’ छ । स्वेतपत्रले आर्थिक क्षेत्रका समस्यै समस्या समेटेको छ, कुनै आशलाग्दो अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन केही उपायहरू उल्लेख गरिएका छन् तर ती समग्रमा यति भयावह अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सक्ने खालका छैनन् । सधैँजसो भनिँदै आएका नै छन् ।
बढ्दो आयात नयाँ समस्या होइन । विलाशिताका र उपभोगका अन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ किनभने स्वेतपत्रका अनुसार नेपालीको आयको ९० प्रतिशत खर्च उपभोगमा छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ, यो पनि नौलो र थाहा नपाएको तथ्य होइन । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च बढ्दो छ, विकास खर्च खुम्चिँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको खर्च योगदानमा आधारित छैन । वर्षेनी वितरणमुखी बजेट बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ किनभने यसमा लोकप्रियताको आकर्षण छ, राजनीतिक दलहरूलाई लोकप्रिय भएर भोट बटुल्नु छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारीको अवसर झन् झन् साँघुरिदो छ ।
स्वेतपत्रले आर्थिक क्षेत्रमा भएका उपलव्धिको चर्चा गरेको छैन । कुन कुन क्षेत्रमा कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरामा मौन छ । आर्थिक क्षेत्र पूर्णतः संकटग्रस्त छ र अवस्था निकै भयावह छ भन्ने देखाउनमा स्वेतपत्रमा जोड दिएको छ । जस्तो ः हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक परिवेशमा ४० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुुग्नु नराम्रो अवस्था होइन । पछिल्ला केही वर्षमा यो विस्तार भएको हो । अहिलेको नयाँ नीतिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरू पुग्नेछन् । ऋणमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने जस्ता नीति हरेक वर्ष प्राथमिकतामा छन् तर किन अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुनसकेको छैन ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो जसमा विज्ञ अर्थमन्त्रीले उपाय खोजी गर्नुपर्नेछ ।
यो युगमा आधुनिक सामानको खपत बढ्दै जानेछ जो पूर्णत आयातमा निर्भर छ । जसले व्यापारघाटा बढाउँदै लगेको छ । विडम्बना के छ भने, कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा वर्षेनी कृषिउपजकै आयात बढ्दो छ । पेट्रोलियम इन्धनको आयात बढेको बढ्यै छ र यो चाँडै घट्ने छैन । औद्योगिक वस्तु र कृषि उपजमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यात घटाउने प्रभावकारी कार्यक्रम नभएसम्म हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सुधारको सुरुआत हुँदैन । करका दायराहरू फराकिलो बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च घटाउनेजस्ता कामका लागि सरकारलाई कतै अवरोध छैन, यो नियमित प्रक्रियामा पर्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी र अवसर दुवै विज्ञ अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग छ ।